Nri | | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nri: Ihe ọṅụṅụ
Ihe ngosi 4 a na-akọ n'akụkọ nke a nwere ike iji aka aka gị mee maka 5 nkeji tupu afọ ọhụrụ ahụ
A maara aha cocktails na a arụrụ n'ụlọ New Year si otu - ọ bụ otú fashionable na jụụ! Anyị na-enye 4 ụwa a ma ama. Ị na-esi ha ntanye 5 nkeji oge tupu oge elekere - ...
Kedu ihe bụ tii - ka anyị kwuo
Kedu ihe tii? Echere m na ọtụtụ n'ime anyị maara nke ọma azịza nke ajụjụ a, mana ka anyị ga-eleba anya karịa! Ọtụtụ n'ime anyị na-aṅụ kọfị na nri ụtụtụ, kamakwa ndị na-ahụ tii ...
Kedu uru mmiri ara ehi a kụrụ agwa? Kedu ka o si dị iche site na mbụ?
Kedu uru mmiri ara ehi a kụrụ agwa? Kedu ka o si dị iche site na mbụ? Mmiri ara ehi a na-eme ka ihe di iche iche di iche iche na ihe ozo, o nweghi ihe analogues.
Kedu ka esi mee mmanya na-egbu egbu?
Etu esi eme akpo oxygen? A na-edekarị ntuziaka maka nkwakọ nke mmanya ahụ) Na-eme mkpọtụ site na ahịhịa ahihia na anyanwụ. Na-enweghị tank oxygen - enweghị ụzọ! Ya onwe ya riri udiri nwata a: nodu na ...
Enwere m ga-atụba oghere n'ime ogwe aka na mmanya mmanya nke ụlọ?
Enwere m ga-atụba oghere n'ime ogwe aka na mmanya mmanya nke ụlọ? Enweghị m ike iji mkpanaka kwuo okwu mgbe enweghị m. Ma, dị ka iwu nke ịme mmanya si eme, mee nsị gas. (mmiri slide) Ihe niile ...
Kedu ihe bụ ndụ ndụ nke mmiri ara ehi na-emeghi ọgwụgwọ na ihe kpatara ya? Ọfọn, banyere ederede pasteurized, biko.
Kedu ihe bụ ndụ ndụ nke mmiri ara ehi na-emeghi ọgwụgwọ na ihe kpatara ya? Ọfọn, banyere ederede pasteurized, biko. Mmiri ara ehi na-adịghị edozi ara bụ mmiri ara ehi nke a na-edozi na okpomọkụ nke 70-75C. Ebumnuche nke pasteurization bụ mbibi microflora toxoid. N'ihi ọgwụgwọ a ...
Kedu arabica? Kedu ụdị kọfị ndị ọzọ?
Kedu arabica? Kedu ụdị kọfị ndị ọzọ? Mocha! Ahịa dị iche iche sitere na Ethiopia na Robusta (kọfị Congo). Ndị ọzọ na kọfị osisi, na ọtụtụ n'ime ha, anaghị enye mkpụrụ osisi oriri. Ụdị ...
Kedu otu biya biya siri ike
Kedu otu biya biya siri ike nke nwere nnukwu ụlọ mmanya siri ike nke 7 na n'elu? Nhazi ọkwa nke bekee na agba bụ nke zuru oke na Russia, nakwa na mba ndị ọzọ dị na Europe, dịka Spain.
esi esi nri frozen cherị KISSEL ????
esi esi nri frozen cherị KISSEL ???? Wunye tomato na mmiri, gbakwunye shuga, sie nri dị ụtọ. Dichapụ starch: na 1l compote, pasent zuru ezu nke starch kwụsịrị na obere mmiri nke mmiri oyi ma ọ bụ compote.
Kedu ka esi eme lemonade n'ụlọ?
Kedu ka esi eme lemonade n'ụlọ? abụọ lemons (nke dị ọhụrụ, nke na-adọrọ mmasị), otu lita na lita ọkara, okpukpu isii nke shuga na obere mint akwụkwọ. My lemons, anyị na-ebipụ ọ bụla lemon na ọkara na ...
Vodka ke friza nwere ike ifriizi?
Nwere ike vodka na friza? ọ bụrụ na ọ dị mma, site na -28,7 C na nke dị ala, mana n'eziokwu eziokwu ụkpụrụ dị iche iche, ihe niile 30 C moonshine freezes N'okpuru -25 freezes. Enyocha. Ọkụ - si…
a na-akpọ usoro nke ịgwakọta mmanya ...
a na - akpọ usoro ị winụ mmanya --- ngwakọta ahụ ga - ebido n'eziokwu ahụ na mmanya anaghị agwakọta ... na wort na-agwakọta na mmiri ihe ọ canụ notụ enweghị ike ịkpọ mmanya, mmanya anaghị adịcha obere ma ọlị, ma ọ bụrụ na ...
Kọfị decaffeinated - otu esi ghọta ya?
Kọfị decaffeinated - otu esi ghọta ya? Nke a bụ ihe dị ka nwanyị roba. Nke a bụ kọfị decaffeinated, m na-a itụ ya n’oge ọkọchị mgbe nrụgide bilitere. Enweghị m ike ịsị na ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu, mana tii ...
Ezi whiskey ...?
Ezigbo oke ọnụ ajị anụ ... Karịa ọnwa ọma! Buru ụzọ: 1). Label2 na-acha uhie uhie). Akara 5 ndị a na-acha aja aja na-atọ ụtọ, dị nro, ma ị nwere ike idobe ihe ruru otu puku. white horseA general good whiskey - adaa oke whiskey nma ...
kedu aha ndị na-atọ ụtọ mmanya
kedu aha ndị na-atọ ụtọ mmanya na-atọ ụtọ mmanya zzzz zzzz zzz zzz The taster adịghị na-agbalị ngwaahịa, ma na-enye ya ọnụego na-adịghị n'okpuru nnyocha. Na Rom oge ochie, ha kwuru, sị: ...
nye uzommeputa maka eggnog
Nye uzommeputa maka eggnog Yolk, 2- 3 tsp. shuga, 1 hl bọta, 1 tsp. koko ntụ ntụ. Na-agbanye ihe niile. Ịnwere ike ịgbakwunye ole na ole nke ihe ọṅụṅụ lemon. Eggnog ...
esi esi nri Grog n'ụlọ ???
Esi mee Grog n'ụlọ? Wụ ọkụ (ma ...
Kedu ihe ị ga-eme whiskey? Kedu ihe mejupụtara ya?
Kedu ihe ejiri Scoisch wiskey mee? Gịnị bụ ihe mejupụtara ya? Ọnwa Oma !!! Gụnyere nke nne nne ya !!!! N’ezie, moonshine nụchara anụcha n’elu osisi pine, nke dị n’oghere Whiskey bụ ihe ọ alcoụholicụ na-egbu egbu nke e mere si…
Ogwe 777! Ị chere na ọ bara uru ịṅụ mmanya a? Na onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, dee mmetụta na otú e si esi atọ ụtọ!
Ogwe 777! Ị chere na ọ bara uru ịṅụ mmanya a? Na onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, dee mmetụta na otú e si esi atọ ụtọ! I nwekwara ike ide ihe gbasara ihe ọṅụṅụ a. Na 60's ...
Kedu ihe dị iche n'etiti biya na biya mmanya?
Olee ọdịiche dị n’etiti ihe ọ beerụ beerụ biya na biya? Okwu a "mmanya mmanya" dị naanị na Russia, a webatara ya n'ime Iwu teknụzụ maka imepụta biya na ihe ọ drinksụ drinksụ sitere na ya site na State Duma nke Russian Federation n'okpuru…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,355.